Ny fandaniam-bola amin'ny marketing dia miova amin'ny fikarohana | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 17, 2008 Alatsinainy Martsa 17, 2008 Douglas Karr
Vao niteny tamin'ny faritra iray aho Saina maranitra hetsika ary fanazavana ny Search Engine Dominance ao amin'ny Web 2.0. Ny ankamaroan'ny fahombiazan'ny fitorahana bilaogy orinasa sy ny fidirana amin'ny media sosialy ho an'ny orinasa dia notarihin'i Search Engines. Tsy ampy ny manangana tranokala mangatsiaka ary miandry azy ho hita - mila manamboatra ny tranokalanao ianao hita ary mitady mpampita vaovao hafa hampielezana ny teny.
Ireto misy fisongadinana nalaina tamin'ny valin'ny fanadihadiana:
SEMPO dia namoaka fanadihadiana androany tao amin'ny kaonferansa Search Engine Strategies. Na dia toa matanjaka aza ireo isa, ary taratry ny faniriana ny hanohizan'ny mpivarotra amin'ny fikarohana, ny fanadihadiana dia tsy afaka manombatombana ny vokatry ny tsy fahampian'ny tahiry fikarohana (fikarohana) nateraky ny fitotonganana ara-toekarena lehibe.
Ny fandaniana amin'ny marketing dia miova amin'ny fikarohana
Ny fikarohana iray dia ny fitomboan'ny fandaniana amin'ny marketing amin'ny ny fandaniana amin'ny fanaovana doka amin'ny gazety an-tsoratra, ny fampandrosoana ny tranokala ary ny asa marketing hafa, rehefa manova ny ampahany amin'ny pie fandaniany vola ny mpivarotra, manaraka ny mpanjifa satria miantehitra bebe kokoa amin'ny motera fikarohana izy ireo mba hanaovana fikarohana mialoha ny fividianana.
Ireto misy fikarohana lehibe:
Ny indostrian'ny SEM any Amerika Avaratra dia nitombo hatramin'ny 9.4 miliara dolara tamin'ny 2006 ka hatramin'ny $ 12.2 miliara tamin'ny 2007, mihoatra ny vinavina teo aloha 11.5 miliara dolara ho an'ny 2007
Ny fandaniam-bola SEM any Amerika Avaratra ankehitriny dia vinavinaina hitombo hatrany amin'ny 25.2 miliara dolara amin'ny 2011, izay avo indrindra amin'ny tombana 18.6 miliara dolara tamin'ny taona lasa.
Ireo mpivarotra dia mahita dolara fikarohana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola amin'ny fandaniam-bola amin'ny magazine printy, fampandrosoana ny tranokala, mailaka mivantana ary programa marketing hafa.
Ny fametrahana karama dia misambotra 87.4% amin'ny fandaniana 2007; SEO biolojika, 10.5%; fampidirana vola, .07%, ary fampiasam-bola teknolojia, 1.4%.
Google Ads no mijanona ho fandaharana fanaovana doka fikarohana malaza indrindra, saingy ny fandaniam-pikarohana notohanan'ny Google sy Yahoo dia nihena hatramin'ny herintaona lasa izay.
Tags: F-varotravarotra facebooke-varotra facebookfacebook ecommercefanandramana marobempitorySliderfanaraha-maso hainganafanaraha-maso hainganafamahana olana haingana
Mar 19, 2008 ao amin'ny 4: PM PM
Vao haingana aho no namaky ebook telo izay manome torohevitra mahatalanjona momba fikarohana ara-barotra amin'ity vanim-potoana web2.0 ity ary malalaka daholo ka lazao amiko raha tsy manampy ny mpamaky anao izany.
Mar 19, 2008 ao amin'ny 5: PM PM
Ianao, angamba, no manana ny tranokala RATSY RATSY hitako hatramin'izay. Tena miharihary fa miezaka misarika ny fifamoivoizana amin'ny milina fikarohana fotsiny ianao amin'ny alàlan'ny fanipazana lahatsoratra roa eo anelanelany. Manantena aho fa tsy miezaka ny hifikitra fotsiny amin'ny fifamoivoizanako ianao.
Mar 20, 2008 ao amin'ny 5: PM PM
Ny statistikan'ny Cj-ko dia tsy milaza fa wezeemall no tranonkala ratsy indrindra. Ny fanehoan-kevitra navelako dia natao hanampiana ny mpamaky satria mifanaraka amin'ny lohahevitry ny lahatsoratrao… .
Mar 20, 2008 ao amin'ny 7: PM PM
Te-hahazo antoka fotsiny aho fa tsy nanary rohy ianao mba hanandrana hahazo tombony amin'ny fikarohana. Miala tsiny aho amin'ny faniratsirana anao ary mankasitraka anao manampy amin'ny resaka.
Ny tiako holazaina dia ny hahazoana antoka fa 'tena izy' ianao fa tsy spammer. Mariho fa tsy nesoriko fotsiny ilay rohy – te-hijery aloha aho.
Mar 21, 2008 ao amin'ny 9: PM PM
Fampahalalana tena tsara amin'ny hafatrao. Manoro hevitra ny mpanjifanay momba ny teknolojian'ny fandraharahana izahay mba hifantoka voalohany amin'ny fahitany amin'ny Internet, ary ny fikarohana no manomboka. Na izany aza, heveriko fa misy loza mitatao amin'ny fandaniana vola be loatra amin'ny asa ara-barotra hafa, indrindra ny fampivoarana tranonkala. Miaraka amin'ny tranokala ho ivon'ny programa ara-barotra – ary ho an'ny marketing ara-teknolojia avo lenta izay azo omena azy – dia manaitra ny isan'ny tranonkala tsy mahomby. (Ary tsy mpamorona tranonkala aho.)
Ny fifamoivoizana dia azo antoka fa iray amin'ireo fanalahidy telo amin'ny fampitomboana ny fidiram-bola, ary ny varotra fikarohana dia tsara amin'izany. Saingy ny fahafahana manova izany fifamoivoizana izany ho mpanjifa dia fanalahidy faharoa, manan-danja mitovy.
Tsapako fa mampita vaovao fotsiny ny lahatsoratrao fa tsy manao fanambarana. Manontany tena fotsiny ny hevitrao.